WARARKA CAALAMKA Archives | Page 96 of 96 | SOMALI NEWS U Adeegaha Bulshada
Home / WARARKA CAALAMKA (page 96)
Halkee laga filayaa in uu Turkigu gaaro sanadka 2023 awooda uu dunida ku yeelanaayo.12-07-2017
Siidow 12/07/2017	WARARKA CAALAMKA, WARARKA MAANTA
Sanadka 2023 oo ku beegan 100 guuradii aasaaskii jamhuuriyada Turkiga ayaa sidoo kale ah sanad ku calaamadeysan isbedel dhab ah oo ay gaarto dawlada turkiga gaar ahaan dhinacyada awooda milateriga, siyaasada, dhaqaalaha iyo dhaqankaba.
Mugdisho Labo Beelood oo Dagaalantay iyo Colaad ka jirta ka.12-07-2017
admin 12/07/2017	WARARKA CAALAMKA, WARARKA MAANTA
Colaada soo jireenka ah ee u dhaxeysa beelaha walaalaha ah ee Cabdalla Caroone iyo Celi Cumar oo ka wada tirsan beelweynta Abgaal ayaa ka bilaabaday magaalada Muqdisho, kadib markii ay fashilantay waan waan iyo heshiisyo hordhac ahaa oo lagu gaaray degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Colaada labada beel u dhaxeysay ayaa waxay ku koobneed baadiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe, hase ...
Aqriso””Mooshin Cusub oo Ay Ka keenen Xildhibaanada R /W Kheeyre.12-07-2017
Ra’isul Wasaaraha DFS ayaa kulan la qaatay Xildhibaano katirsan Barlamaanka Soomaaliya oo uu hogaaminayay gudoomiyaha barlamaanka Prof Jawaari. Kulankan ayaa si gaar ah looga hadlay sedex qodob oo waa weyn kuwaas oo kala ahaa: Mooshinka laga gudbinayo RW Kheyre oo xal laga gaaray, Ruwaayadii Carada dhalisay ee Barlamaanka furitaankiisa lagu jilay iy
Mareykanka iyo Qatar oo Heshiis ka gaaray la dagaalanka argagixisada.12-07-2017
Nuxurka heshiiskaan ay wada gaareen dowladaha Mareykanka iyo Qatar ayaa dhigaya in si wada jir ah looga qeyb qaato la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo in la iska kaashado sidii tallaabo looga qaadi lahaa kuwa taageera argagixisada. Heshiiskaan oo shalay dhacay ayaa waxaa dowladda Mareykanka u saxiixay xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson hala Qatar uu qalinka ku duugay Wasiirka arrimaha ...
Wiilka uu Dhalay Madaxweeyne Mareeykanka oo Sir aan la Fileeyn Shaaca ka.11-07-2017
admin 11/07/2017	WARARKA CAALAMKA, WARARKA MAANTA
Wiilka uu dhalay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sii daayay EMAILO muujinaya inuu Ruushka la wadaagay warbixino halis ah oo ku saabsan Hillary Clinton. Donald Trump Jr ayaa sheegay iney jireen warbixino waa weyn oo ay dowladda Ruushka ku taageerayesay Trump. Saraakiisha Mareykanka ayaa baaritaan ku haya lugtii ay Ruushak ku lahaayeen doorashadii ka dhacday dalkaas. Mr Goldstone ayaa beeniyay ...
Dacwad Culus oo lagu Soo Oogay Maamulka Kismaayo +Edeyn Xoogan oo ka.11-07-2017
Dacwad heer Federaal ah ayaa lagu soo oogay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe). Dacwadan oo la geeyay Maxkamadda Sare ee dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa gudbiyay mid ka mida xildhibaanno dhowaan laga saaray Baarlamaanka Jubbaland oo lagu magacaabo Maxamed Cali Yuusuf. Xildhibaankan ayaa Maxkamadda Sare ee dalka u gudbiyay dacwad uu ku soo oogay Axmed Madoobe, taasoo ...
War deg deg ah :Dowlada Soomaaliya oo Shaacisay Xiligii Internedka u imaan lahaa Soomaaliya.11-07-2017
Wasiirka Boostadda iyo Isgaarsiinta Soomaaliya Cabdi Canshuur Xasan ayaa ka hadlay xiliga uu dib u soo laabanayo internetkii Fiber Optic-ga ee Koonfurta Somali oo go’an muddo labo todobaad ka badan iyo khasaaraha dhaqaale ee dalka ka soo gaaray. Wasiirka ayaa sheegay in intarnetka go’an maalin waliba ay ka soo gaarto dalka khasaaro lacageed oo dhan 10 milyan oo dollar. Cabdi ...
Dad Qodanayay Qabuure Uu Ku Aasan Yahay Sheekh Caan Ah Oo La Qabtay.11-07-2017
Arrin lala yaabay ayaa ka dhacday degmada Arabsiiyo ee ka tirsan maamulka Somaliland, kadib markii ciidamada booliska gacanta ku dhigeen labo oo ka mid ah afar qof oo lagu eedeeyay inay qodanayeen qabuuraha sheekh caan ah oo ku aasan qabriga Sheekh caan ka ah Somaliland. Qabuurahaan ayaa waxaa ku aasan Sheekh Suufi Nuuriye oo ka mid ahaa dadkii aas-aasay degmada ...
Deg Deg ah: Toogasho Qaab Cusub oo cawada ka dhacday Gobolka Banaadir ka dib markii ay soo.10-07-2017
admin 10/07/2017	WARARKA CAALAMKA, WARARKA MAANTA
Wararka laga helayo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dabley hubeysan ay qaab cusub u khaarijiyeen mas’uul ka tisan Gobolka Banaadir. Dableyda hubeysan ayaa Mooto ay wateen u adeegsaday inay ku fuliyaan toogasho, iyagoo kadibna goobta ka baxsaday isla markii ay fuliyeen falka ay ku khaarijiyeen mas’uulka. Mas’uulkan ayaa magaciisa lagu sheegay Maxamed Cabdullaahi Tima-jilic, ayaa lagu toogtay degmada Hodon ee ...
War Deg Deg ah: Janaraal Jaamac Qaalib oo Xilkii loo Magacaabay iska Casilay kana war Bixiyay sida uu.10-07-2017
Warar goordhow nasoo gaaray ayaa sheegaya in Janaraal Jaamac Maxamed Qaalib uu iska casilay xil uu umagacaabay madaxweynaha dowladda Soomaaliya. Jaamac Maxamed Qaalib ayaa loo magacaabay xalay Guddoomiyaha Sanduuqa Taakuleynta Ciidamada laakiin saacado kadib xilkaas ayuu iska casilay. Madaxtooyadda Soomaaliya kama aysan hadlin go’aanka uu Janaraal Qaalib xilkan isaga casilay waxaase la filayaa in badalkiisa la magacaabo. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya ...
Meyd la amray inaan la qaadi Karin, Dad Gaari la dulmarsiiyay, & Dilal ka dhacay Duleedka Muqdisho.9-07-2017
admin 09/07/2017	WARARKA CAALAMKA, WARARKA MAANTA
Toban Qof ayaa 24kii saac ee la soo dhaafay lagu dilay duleedka Magaalada Muqdisho gaar ahaan waddada u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye. 2 Qof waxaa ay Ciidanka AMISOM ku dileen degaanka Xaawo Cabdi ee Gobolka Shabeellaha hoose,kuwaas oo ahaa Askar ka tirsan Dolwadda oo saarnaa Mooto baajaaj. Ciidamada Midowga Afrika ayaa gaariga ay wateen jiirsiiyay Bajaajta waxaana ka dhashay dhimashada ...
NEW: Guddoomiyha G: BanadirTaabit oo Shirkad Gaara ku wareejiyay Gaadiid & Warshado Turkigu siiyay G/Banaadir.9-07-2017
Guddoomiyaha Gobolka banaadir Taabit Cabdi Axmed ayaa Gaadiidka iyo Qalab loogu deeqay Maamulka Gobolka Banaadir ku wareejiyay shirkad gaar ah. Wararka la ogaaday ayaa sheegaya in Taabith uu heshiis qarsoodi ah la galay shirkad lagu magacaabo Kulmiye, taasoo uu ku wareejiyay Gaadiid dhisme ku dhow 50 iyo Warshado ay Hay’adda Bisha Cas ee Turkiga siisay Maamulka Gobolka Banadir. Heshiiska oo ...
Farmaajo oo Qirtay in Heshiiska Saldhiga Berbera uu Xasan Sheekh wax ka og yahay.8-07-2017
admin 08/07/2017	WARARKA CAALAMKA, WARARKA MAANTA
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo ka hadliyay furitaankii Kalfadhiga Labaad ee Baarlamaanka ayaa ka gaabsaday rasmi ah uu uga hadlo heshiiskii ay wada galeen Somaliland iyo Imaaraadka Carabta ee ku aadan saldhigga Berbera, kaddib markii Xildhibaanada ay mooshin ka keeneen bishii April ee sanadkan Madaxweyne Farmaajo oo ka jawaabayay qoraal uu bishii May u qoray Guddoomiyaha Baarlamaanka ee ku ...
XASAASI: Thaabid oo Jawaari iyo Xildhibaanadiisa Dusha ka saaray Maqaamka Muqdisho.8-07-2017
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa khudbad ka jeediyay Kalfadhigii labaad ee Baarlamaanka, kaasoo maanta uu si rasmi ah u furay Madaxweynaha Soomaaliya. Guddoomiye Taabid ayaa ugu horeyn sheegay in Baarlamaanka uu hor-yaalo howlo qaran oo culus, isagoo soo hadal qaaday arrinta Maqaamka Muqdisho iyo sida ay tahay in lagu helo, iyadoo loo marayo sida dastuurka ...
Arin Cusub/Duqa Gobolla Banaadir oo Ciidamo u diray Beerta Nabada ( Maxa dhacay) 06-07-2017
admin 06/07/2009	WARARKA CAALAMKA, WARARKA MAANTA
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Taabit Cabdi Maxamed ayaa ku dhaqaaqay tallaabo uu ku fulinayo amarkiisii shaqeyn waayay ee ahaa in Beerta nabadda lagu galo lacag la’aan. Afhayeenka Gobolka Banaadir C/fataax Cumar Xalane ayaa sheegay in ciidamada Booliska iyo kuwa nabadsugidda Gobolka Banaadir loo xilsaaray fulinta amarkii laga soo saaray Beerta Nabadda. Maamulka Beerta Nabadda ayaa iska diiday amarkii Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, ...